भिनाजुले सोध्नुभो – पाहामा के पढ्ने ?
बिहीबार, ३० वैशाख, २०७८
वैकल्पिक सरकारको दाबी गर्न बहुमत पुगेन, पुन: ओली नै प्रधानमन्त्री !
एमाले विवादमा नयाँ माेड : विवाद समाधान गर्न कार्यदल बनाइने, खनाल-नेपाल समूहकाे राजीनामा टर्‍याे
थप पाँच हजारले जिते कोरोना, दुई सय १४ जनाको मृत्यु
कोरोनाको चपेटामा विराटनगर : घाटमा आमाको शव जल्न नपाउँदै अस्पतालमा छोराको मृत्यु
झड्केली आमा बलात्कारआरोपी अध्यक्ष जोगाउन रिट लिएर अदालतमा
कोभिडका कारण निमोनिया भए देखिन्छन् यस्ता लक्षणहरू
काठमाडाैँ महानगरले फेरि पिसिआर सङ्ककल गर्न थाल्यो
च्याम्पियन्स लिगको फाइनल खेल पोर्टोमा
आमादब्लम हिमालमा सेनाको सफाइ अभियान टोली
दुई सगरमाथा आरोहीको मृत्यु
मुख्य पृष्ठशिक्षा समाजभिनाजुले सोध्नुभो – पाहामा के पढ्ने ?
आइतबार, १२ पुस, २०७७ 0प्रतिक्रिया
डा. केआर खम्बु
भोलिपल्ट बिहानै म र केदार दाइ ठुली दिदी (रेशमी)लाई पुर्‍याउन ठुलढुङ्गा एक हजार सात सय मिटरको उचाइमा रहेको साँवातिर लाग्यौँ ।
भाउजू र भतिजाहरू कटुन्जे होमतोकतर्फ लाग्ने भए । हामी गफ गर्दै र बाटामा भू–बनावट, पर्यावरणीय दृश्य, उभयचर, सरीसृप आदि अवलोकन गर्दै अघि बढ्यौँ ।
पहाडी बाटो तल र माथि अनेक पच्याङ पार गर्दै अँधेरी हुँदै मूलडाँडा, सेल्मे, कपासे र हरहरे भन्ज्याङमाझ अवस्थित सावा, ढुल्ढुङ्गा पुग्यौँ । त्यहीँ थियो ठूल्दिदीको घर ।
‘खोइ काम लाग्ने विषयजस्तो त मलाई लागेन है भाइ !’ मैले जति व्याख्या–विश्लेषण गरे पनि भिनाजुले पत्याउनुभएन ।
एकछिन बिसाउँदै भिनाजु अञ्जनीकुमार राई (रामकुमार)सँग त्यहाँको खोलानाला, जलाधार भएको ठाउँ घुमाइदिन आग्रह गरेँ । त्यसपछि उहाँसँग हुरहुरे दुई हजार आठ सय मिटर उचाइबाट झर्ने मुखिताङ खोला अवलोकन गर्न गयौँ । माथि डाँडादेखि तल गाउँसम्मै बाक्लो जङ्गलले ढाकिएको रहेछ । जङ्गल भित्रबाट पानी निस्केर सावा खोला बन्छ । यो जङ्गल भिनाजुहरूको पुख्र्याैली शिकार खेल्ने जङ्गल रहेछ भने खोला चाहिँ पाहा पक्रने ठाउँ ।
खोङटाङ गाउँपालिका सेल्मे, कपासे, हलहले भन्ज्याङमुनि सावा, ठूल्ढुङ्गा मुखिताङ जलाधार क्षेत्र ।
तस्बिर– कृष्णदेवान राई
यसबाहेक यहाँ माछाहरू पनि प्रशस्तै पाइने । वन्यजन्तुहरूमा चितुवा, मृग, भालु, कालिज, मुनाल आदि पाइँदोरहेछ । हिउँदमा माथि कपासे, सेल्मे र हलहले डाँडाहरूमा हिउँले ढाक्ने गर्छ । कहिलेकाहीँ त यसभन्दा तल मुखिताङ, कानढाकासम्म पनि ढाक्ने गर्छ । प्रायः यहाँ बाह्रैमास गर्मी हुँदैन ।
त्यहाँ मैले भ्यागुता, छेपारो, सर्प आदि खोजेको देख्दा भिनाजु छक्क पर्नुभयो । मैले विद्यावारिधिको पढाइ त्यही विषयमा गर्दै छु भन्दा उहाँले थप अचम्म मान्दै सोध्नुभयो, ‘होइन पाहामा त्यस्तो के छ र अनुसन्धान गर्ने ?’
मैले उभी–उभी उभयचर, तिनको महत्त्व र जीवनशैलीबारे निकै व्याख्या–विश्लेषण गरेँ । तर उहाँ भने खित्का छोडेर हाँस्नुभयो । ‘खोइ काम लाग्ने विषयजस्तो त मलाई लागेन है भाइ !’ मैले जति व्याख्या–विश्लेषण गरे पनि उहाँले पत्याउनुभएन ।
छाँगे पाहा – राई बान्तवा भाषामा काङमाकी लकस, वैज्ञानिक नाउँ न्यानोराना इर्सेपी ।
मैले त्यहाँ सङ्कलित नमुनाहरू जतनसाथ पोको पारेँ । भिनाजु झन् छक्क परेर हेरेको–हेरेकै हुनुभयो । उहाँलाई मैले त्यसैमा पिएचडी गर्दै छु भन्ने अझै विश्वास लागेन ।
घर आयौँ । राति अबेरसम्म विविध पक्षमा गफ गरेर सुत्यौँ ।
भोलिपल्ट खाना–साना खाएर हिँड्ने तयारी गर्दैगर्दा मुसलधारे पानी पर्‍यो । मध्य दिनतिर जसोतसो पानी रह्यो । दिदी भने बस् कि बस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला हिँडेर कटुजे पुग्न नसकिने भए पनि सर्वेक्षण गर्दै जाने भनेर दिदी र भान्जीहरूसँग जबर्जस्ती बिदा भयौँ ।
बिदा भएर नाक ठोकिने उकालो लाग्यौँं । भिनाजु पनि सँगै आउनुभयो र केही उकालो चढी नागी डाँडो कटाएर फर्किनुभयो ।
मेरो अनुसन्धान यात्राबाट
अनुसन्धान पाहा सरीसृप
हात्तीको आक्रमणबाट झापामा एक पुरुषको मृत्यु
चीन सरकारसँग खोप र स्वास्थ्य सामाग्री माग
अस्पतालको भनाइमा प्रशासनको ध्यानआकर्षण
कोरोना सङ्क्रमण : भारतमा उस्तै, ब्राजिलमा बढ्दै, अमेरिकामा नियन्त्रण हुँदै